Toddobada dambi ee Barcelona
Hal lug iyo badh oo Champions League ah, oo looga adkaaday 2-0 looga reebay semi-finalka heerka koowaad ee Copa del Rey iyo La Liga iyo guuldarro, Barcelona ayaa gaadhay meel hoose intii lagu jiray xilli ciyaareedka.
Kooxda Ronaldo Koeman waxay gashay 7 dambi oo waaweyn oo horseeday ciqaabtooda.
Khaladaadka shaqsiyadeed ee aan la cafin
Kubada cagtu waa ciyaar khaladaad ka buuxo laakiin khaladaadka Barcelona waxay noqdeen kuwa xad dhaaf ah. Lenglet wuxuu sameeyay qaladaad badan oo ay kujiraan labo kulan oo uu wajahay Cadiz. Inta badan ciyaartoyda kooxda ayaa sameeyay qaladaad shaqsiyadeed xilli ciyaareedkan, xitaa kuwa ay kooxda ku kalsoon tahay, sida Frenkie de Jong. Khaladaadka ugu xun ayaa ah Pique iyo Neto iyo xitaa Araujo ayaa qaladaad sameeyay.
Ma caqli badan yahay goolka hortiisa
Barca waa inay abuurtaa fursado aan caadi aheyn oo goolal lagu dhaliyo. Xitaa kuma jiraan kooxaha ugu sarreeya goosha horteeda. Kaliya hal tusaale waa Cadiz, kaasoo 20 darbo ku dhaliyay goolka.
Koonayaasha iyo laadadka xorta ah looma xaglinayo
Barcelona ayaa soo martay 242 koone xilli ciyaareedkaan waxayna dhalisay kaliya hal gool, iyadoo Martin Braithwaite uu shabaqa soo taabtay kulankii Dynamo Keiv. Koornada waxaa tuuray Alena oo aan haatan ku jirin kooxda. Kooxda ayaa sidoo kale rigoorooyin ka lumisay Messi, Griezmann, Braithwaite, Pjanic iyo Dembele. Dhawaan uun ayuu Messi kusoo laabtay laadadkiisii ​​xorta ahaa ee ugu fiicnaa.
Ma hor istaagi karaan kooxaha waaweyn
Guusha kaliya ee weyn ee ay Barcelona gaartay xiliciyaareed kaan waxay ka timid kooxda dhibtooneysa ee Juventus, oo xitaa aan ka caawinin inay hogaanka u qabtaan group-kooda markii Juve ay 3-0 ku garaacday Barca kulankii Camp Nou. Waxay guuldarro kala kulmeen Real Madrid (3-1), Atletico (1-0), Bilbao (3-2) finalka Spanish Super Cup, Sevilla (2-0) wareega koowaad ee semi-finalka Copa del Rey iyo PSG (4-1) kulan ka tirsan Champions League oo ka dhacay Camp Nou.
Kooxo yaryar ma adka
Qaar ka mid ah natiijooyinkii ugu xumaa ee Barcelona ayaa ka yimid kooxo yar yar. Guul darrooyinka Getafe (1-0) iyo Cadiz (2-1), barbaro ayey la gashay Alaves (1-1), Eibar (1-1) iyo Cadiz markale.
Ma joojin karaan himilooyinkooda
Waxay kaliya ku guuleysteen inay shabaqa ilaashadaan seddex meelood meel kulan oo ka mid ah waxayna sii daayeen kaliya 12 36 kulan. Waxaa laga dhaliyay sideedii kulan ee ugu dambeysay. Markii ugu dambeysay ee Ter Stegen uu shabaqa ilaashado wuxuu ahaa kulankii Elche bishii Janaayo.
Barcelona ayaa lumisay laba dhibcood oo dheeri ah maxaa yeelay ma aysan hayn hogaanka. Tani ma aha markii ugu horreysay ee ay sidan oo kale dhacdo. Super Cup-ka Isbaanishka ayaa guuleystay kadib dhimashadii Asier Villalibre. Valencia ayaa barbareysay hogaanka Barca. Madrid ayaa si lamid ah sameysay Clasico, halka Cadiz uu gadaal ka yimid si uu u garaaco Barca.
Sababta rasmiga ah ee ganaaxa Manchester United
Xiddiga Liverpool ayaa yimid